China လက် ၀ ယ်0~ 999999. 9kwh 1.5 (6) A5(20) A 10 (40) A 20 (80) တစ် ဦး NB-IoT ရထားလမ်းအမျိုးအစားတစ်ခုတည်းအဆင့်ကြိုတင်ငွေဖြည့်စွမ်းအင်မီတာစက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူ | ဟာဝိုင်အီ
လက်ကား0~ 999999. 9kwh 1.5 (6) တစ် ဦး က5(20) တစ် ဦး က 10 (40) တစ် ဦး 20 (80) တစ် ဦး NB-IoT ရထားလမ်းအမျိုးအစား Single- အဆင့်ကြိုတင်ငွေဖြည့်စွမ်းအင်မီတာ
NB-IoT သည်ရေမီတာမြင့်မားသောလုံခြုံရေး၊ စိတ်ချရသောကွန်ယက်၊ နက်ရှိုင်းသောလွှမ်းခြုံမှု၊ ဘက်စုံဆက်သွယ်မှု၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းခြင်း၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်းသည်ရိုးရာရေမီတာနှင့်စမတ်ရေမီတာများ၏ပြproblemsနာများကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောဖြေရှင်းနိုင်ပြီးရေလုပ်ငန်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလိုအပ်ချက်များကိုပိုမိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ အရာဝတ္ထုများအင်တာနက်နှင့် cloud computing ကဲ့သို့သောနည်းပညာအသစ်များကိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုခြင်းဖြင့် NB-IoT နည်းပညာကိုအခြေခံသောစမတ်ရေသည်စမတ်မြို့ကြီးများတွင်သတင်းအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်၏အညွှန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
နာမည် ရှင်းလင်းချက် ဖွဲ့စည်းပုံ
parameter တိုင်းတာခြင်း ဦး, ငါ, P, မေး, S, PF, F, etc စံ
စွမ်းအင်တိုင်းတာခြင်း Single- အဆင့် (သုံးအဆင့်) စွမ်းအင်တိုင်းတာခြင်း စံ
ကြေးထိန်းချုပ်မှု အဝေးမှထိန်းချုပ်သောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုအရင်ပေးပြီး၊ ထို့နောက်ဒေသခံဖွင့်ပွဲနှင့်ပိတ်ရန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုအသုံးပြုပါ စံ
Overload ကာကွယ်မှု အချိန်နှင့်တပြေးညီပါဝါတန်ဖိုးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါက၎င်းသည်အနိမ့်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်ပါကလျှပ်စစ်ရောင်းအားကဒ်ကိုထည့်ပြီးသည့်နောက်၎င်းသည်အလိုအလျောက်လည်ပတ်ခြင်း၊ ပြတ်တောက်ခြင်းအမှတ်ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးခြင်းကိုပြန်လည်ရရှိလိမ့်မည်။ စံ
မျက်နှာပြင် ၇- ဂဏန်းအစိတ်အပိုင်းကုဒ်နံပါတ် LCD ဘောင်ခတ်ထားသောဖန်သားပြင် စံ
ဆက်သွယ်ရေး RS485 interface, Modbus-RTU protocol၊ NB-IoT protocol ကိုက်ညီမှု
ဆိုးသောဝန်ထိန်းချုပ်မှု ချက်ချင်းအဆင့်ပါဝါကိုစစ်ဆေးပါ၊ ၎င်းသည်သတ်မှတ်တန်ဖိုးထက်ကြီးလျှင်၊ အလိုအလျောက်လည်ပတ်ခြင်း၊ ဆိုးသောဝန်ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့် relay ပိတ်ကဒ်ကိုထည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ပါဝါထောက်ပံ့မှုကိုပြန်လည်ရယူရန် close command ကိုပေးပို့ခြင်း။ ကိုက်ညီမှု
ရှေ့သို့ လက်လီမြင့်မားပြီးလုံခြုံစိတ်ချရသောကွန်ယက် ၁၅ မီလီမီတာလူနေအိမ်ရေမီတာသွပ်ကိုယ်ထည်